Shiinaha UV panel guddi daabacaadda YA503 saarayaasha iyo shirkado | Yingjiwei
UV daabacaadda guddiga YA503
Noocyada aluminium UV guddi daabacan
2. U daabac sida ku xusan qaabkaaga.
3. Si fudud loo nadiifiyo loona dayactiro.
4. Ku habboon rakibidda.
5. Muuqaal qurxoon oo waara
6. Deegaanka u roon, 100% dib ayaa loo isticmaali karaa.
Aluminium UV daabacaadda guddiga waa mid ka mid ah tiknoolajiyada daaweynta dusha sare ee ugu sarreeya ee loogu talagalay guddiga aluminium. Sababtoo ah habka daabacaadda, fiiqitaanka qaabka iyo saxnaanta aagga buullaynta midabka oo ka fog tiknoolajiyada daaweynta aluminium dhaqameedka. Gaar ahaan tikniyoolajiyada daabacaadda UV ee saddexda geesood ah, saxnaantideeda saxda ah iyo saxsanaanta midabaynta ayaa aad uga sarreeya hannaanka soo jireenka ah, waana mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee soosaarida geeddi-socodka etching ee aluminium aluminium. Qoraalka aluminium ee daabacaadda UV wuxuu leeyahay dhumucda soo socota ee 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, iwm Cabbirka ugu badan ee ka dambeeya waxyeellaynta wuxuu gaari karaa 1500x5000mm.
Thanks to tiknoolajiyada daabacaadda, qaabka ayaa loo qaabeyn karaa doorbidyadaada dalabka. Si kale haddii loo dhigo, waad daabici kartaa iyadoo lagu saleynayo qaabka aad bixiso. Sidaa darteed, waxay si gaar ah ugu habboon tahay dhammaan shuruudaha gaarka ah ee goobta qurxinta, waxayna aad ugu habboon tahay daaweynta darbiga qaar ka mid ah hudheelada dhammaadka-sare, suuqyada laga dukaameysto, dhismaha xafiiska, garoonka diyaaradaha, xarunta metro, saldhigga tareenka xawaaraha sarreeya, isbitaalka, villa, jimicsiga, dhismaha hoyga, hoolka carwooyinka iyo naadiyada.
Magaca badeecada Aluminium UV guddi daabacan
Shayga No. YA503
Daaweynta dusha sare Daabacaadda UV
Midab Habka kartoo
Dhumucdiisuna 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Hababka hawlgalka Khamaarista, goynta, laabashada, foorarsiga, alxamida, xoojinta, shiidi, ranjiyeynta iyo baakadaha.
Codsiyada Ku habboon gudaha, hudheelka, isbitaalka, dhismaha la deggan yahay, villa, saldhigga, jimicsiga, garoonka diyaaradaha, xarunta metro, xarunta tareenka xawaaraha sare leh, hoolka carwadda, suuqa laga dukaameysto iyo naadiyada
Hore: Ku dayasho marmar YC102
Xiga: Saqafka Aluminium YD101